Inn eLong Wharf- igumbi eli-1 lokulala lilala ezi-4
Igumbi lakho lokulala e i-resort sinombuki zindwendwe onguScott
UScott unezimvo eziyi-7576 zezinye iindawo.
Inn eLong Wharf ikumda obukekayo wamanzi kumda wedolophu yaseNewport. Phuma kwihotele yakho kwaye ujonge isitalato iThames apho uya kufumana ubutyebi beevenkile zekofu, iivenkile zamandulo, iigalari zobugcisa kunye nokuzonwabisa komculo. Iindidi zeendawo ezinomtsalane zaseNewport kunye nezinto onokuthi uzenze zikumgama wokuhamba ukusuka kule ndawo yeholide yokuqala.
Le suite ebanzi enegumbi elinye lokuphumla ilinganisa malunga nama-450 - 600 iinyawo zesikwere. Uya kunandipha ibhedi yokumkanikazi kwigumbi lokulala eliphambili kunye ne-sofa yokulala yokumkanikazi kwigumbi lokuhlala. Izinto ezongezelelweyo zibandakanya ikhitshi kunye nendawo yokutyela. Ubuninzi beendawo zokuhlala ezine.
Undwendwelo lokungena kufuneka lube neminyaka eyi-21 ubuncinane kunye ne-ID esebenzayo kunye nekhadi letyala lediphozithi yokhuseleko.
Amaxabiso kunye nokufumaneka kunokwahluka.
Le yindawo ekuchithelwa kuyo ixesha kodwa ukuzimasa umboniso okanye ukukhenketha AKUFUNI.
Zonke iiyunithi zinikezelwe yi-resort. Imbonakalo yeyunithi, umgangatho, kunye nendawo yeyunithi kwipropathi ayinakuqinisekiswa.
Nje ukuba ugcino-ndawo luqinisekisiwe, uya kucelwa igama kunye nedilesi yondwendwe oluphambili oluya kungena (idesika engaphambili yendawo ekuchithelwa kuyo iiholide nayo iya kucela olu lwazi xa ungenile kodwa ukufumana olu lwazi kwangaphambili kuya kuyikhawulezisa inkqubo yokutshekisha) kunye ngedilesi ye-imeyile ukufumana isiqinisekiso somntu.
Kuba indawo ekuchithelwa kuyo iiholide igcina zonke iiyunithi, ukuhonjiswa kweyunithi kunokwahluka kancinci kwiifoto ngenxa yohlaziyo lwendawo ekuchithelwa kuyo iiholide kunye/okanye utshintsho.
Izimvo eziyi-7 583